Thwebula Vegas Pro 13.0.453 – Vessoft
Isiqophi converters, Umhleli Audio
Thwebula Vegas Pro
Vegas Pro – a enamandla zigqokeka video umhleli shoka ubuchwepheshe eziphambili. Isofthiwe isekela 2D nobe 3D ihluzo futhi ikuvumela ukudala professional isiqophi Ukugunda nobe HD films nge ukwanda okukhulu. Phakathi izici eziyinhloko Vegas eyodwa Pro kungaba uqaphele: kwalokho of ngobuningi nemiphumela ezikhethekile, ukusebenza Abaqaphi multiple, ukusekela zokubhala, ukukhulisa, kuzwakale ukuphelekezela njll Isofthiwe usenza ukuloba iphrojekthi wadala kwi DVD noma Blu-ray noma ulayishe amavidiyo ku-YouTube.
Support for ubuchwepheshe ethuthukile
Inani elikhulu zomculo
Support for amaningi yabezindaba amafomethi
Ukusebenza 3D ihluzo
Amazwana on Vegas Pro:
Vegas Pro Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... Far Manager 3.0.4774 futhi 3.0.4884 beta
Amafayela Isofthiwe okhipha imisebenzi ehlukene ohlelweni ifayela. Isofthiwe isekela umsebenzi ne amaseva FTP futhi inikeza amathuba amaningi ukusebenza kule inethiwekhi.
Zokuham video Isofthiwe ukubuka ividiyo ukusakazwa ngokusebenzisa internet. Futhi isofthiwe kwenza ukuba dala isiteshi sakho siqu ukudlulisa isiqophi inethiwekhi.
System nokwenza Ithuluzi ukuzohlola alungise amaphutha ohlelweni. Futhi isofthiwe kwenza ukuba defragment idrayivu kanzima.